Fotoana Iray Fanararaotra Ho An’ireo Vehivavy Ao Iràna Ny Fifidianana Monisipaly Hoavy ao Iràna · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 11 Mey 2017 6:50 GMT
Vakio amin'ny teny فارسی, Français, Ελληνικά, русский, Español, Português, English
Tao amin'ny Nabz Iran no nivoaka voalohany ity lahatsoratra ity
Ny 19 May, hifidy izay ho filoha sy amin'ireo kandidà mandritry ny fifidianana kaominaly ry zareo Iraniana, hifantina izay ho solontenany ao anatin'ny filankevi-pitantanana isan-tanàna sy isam-bohitra. Nifantoka betsaka tamin'ny hazakazaka ho filoha ny sain'ny vahoaka, saingy ireo fifidianana eny ifotony kosa dia manome vintana tokana ho an'ireo olompirenena hitondra fiantraikany mivantana amin'ny vondrom-piarahamonina misy azy ireo amin'ny alàlan'ny fifidianana ireo manampahefana misaina ny tombontsoan'ny vahoaka eo an-toerana. Ahafahan'ireo Iraniana ihany koa manana vintana hanitsy ny firafitry ny governemanta amin'ny fametrahana vehivavy misimisy kokoa eo amin'ny sehatry ny politika.
Misy 287.425 ireo mpifaninana voasoratra anarana amin'ireo fifidianana isam-paritra ao Iràna amin'ity taona ity, ka vehivavy ny 17.885. Midika io fa 6,3 isanjato amin'ireo mpirotsaka no vehivavy — fitomboana kely hatramin'ny nanaovana ireo fifidianana tamin'ny 2013, izay 5,4 isanjato fotsiny ry zareo tamin'izany fotoana izany.
Araka ny fandalinana iray navoaka tamin'ny 2012, maro amin'ireo vehivavy mitàna toeran'olomboafidy no mirona amin'ny fanaovana politikam-bahoaka manindry kokoa ny olan'ny hatsaram-piainana sy ireo lohalaharana ho an'ny fianakaviana, ny vehivavy ary ireo foko vitsy an'isa. Rehefa omena tosika ho lasa mpitarika ara-politika ny vehivavy, miaina faripiainana mendrika kokoa ny firenena, fanatsarana ny fanabeazana, fotodrafitrasa, sy fahasalamàna, ary amin'ny ankapobeny ny governemanta dia lasa mandray andraikitra kokoa amin'ireo filàna mivantan'ny olompireneny.
Teo ambany fitarihan'ny governemantan'ny filoha teo aloha, Mohammad Khatami, seza 13 tamin'ireo 290 tao amin'ny Majles ao Iràna no nisy ny vehivavy, ny isam-behivavy be indrindra hatramin'izay tao amin'ny parlemanta hatramin'ny nijoroan'io Repoblika Islamista io. Nandritra io vanimpotoana io, nisy ny dingana natao mba hisian'ny firotsahana bebe kokoa avy amin'ireo vehivavy ho ao anatin'ny fitarihana sy ny fandraisana fanapahankevitra ao anatin'ny governemanta. Ireo vehivavy voalohany niditra tao amin'ny kabinetra hatramin'ny nijroan'ny Repoblika Islamista: : Masoumeh Ektebar dia notendrena ho toy ny filoha lefitra ary Zahra Shojaei notendrena ho toy ny mpanolotsaina ny filoha ary mpitarika ilay Ivontoerana vao noforonina ho Fampandraisana Anjara ny Vehivavy. Io dia nifanandrify indrindra tamin'ny tohana nomen'ny fitantanan'i Khatami ho fampitomboana sy fanitarana ny fiarahamonina sivily, ny fahalalahana maneho hiìevitra, ary ireo fanavaozana ny rafitra mpanao lalàna mba ho fanohanana ny zon'ny vehivavy.
Teo ambany fitondran'ilay governemanta fatra-pifikitra amin'n nentindrazana, notarihan'i Mahmoud Ahmadinejad, anefa, nihena ny isan'ireo vehivavy nitàna toerana tao amin'ny governemanta, nitombo ny faneriterena ny fahalalahana maneho hevitra sy ny fiarahamonina sivily. Fanampin'izany, nandàny lalàna mangeja ny zon'ny vehivavy ireo mpanao lalàna, toy ny Lalàna Fiarovana ny Fianakaviana izay manome zo ny lehilahy hanambady maro sy vonjimaika, ary fepetra mampietry ny zon'ireo vehivavy any anatin'ireo dingana fangatahana fisarahana.
Teo ambany fitondran'ny filoha Hassan Rouhani, nisy ezaka vaovao handrisihana ny fandraisana anjaran'ny vehivavy amin'ny politika. Marzieh Afkham no notendrena ho toy ny vehivavy mpitondra teny voalohany tao amin'ny Ministeran'ny Raharaha Ivelany, Elham Aminzadeh notendrena ho filoha lefiry ny raharaham-pitsaràna, ary ilay filoha lefitra tany aloha, Masoumeh Ektebar, notendrena ho filohan'ny Fikambanana Miaro ny Tontolo Iainana ao Iràna
Taorian'ireo fifidianana parlemantera tao Iràna tamin'ny Febroary 2016, lasan'ny vehivavy ny seza miisa 17 tamin'ireo 290 — ny isa ambony indrindra tamin'ny vehivavy tao amin'ny parlemanta Iraniàna hatramin'ny 1979 namoronana ny Repoblika Islamika tamin'ny 1979. Io fitomboana io dia maneho fandresena midadasika azon'ireo mpanohana ny fandraisana anjaran'ny vehivavy misimisy kokoa amin'ny sehatra politika, isan'ireny ireo tao anatin'ny fitantanan'i Rouhani.
Ankoatry ny eo amin'ny sehatry ny firenena, dia mavitrika ihany koa eny amin'ny toerana misy azy ireo vehivavy Iraniàna, miatrika mivantana ireo olana miantraika amin'ny vondrom-piarahamonin'izy ireo ary miasa mitady vahaolana mba hanatsaràna ny kalitaon'ny fiainan'ireo olompirenena any amin'ny distrika misy azy ireo. Mpanelanelana tamin'ny fikatsahana fandriampahalemana sy fampihavanana foko roa mpifandrafy tao amin'ny faritany nisy azy i Homeyra Rigi, governora ankehitriny ao an-tanànan'i Qasr-e Qand ao Sistàna sy Balotsestàna, izay fantatra ihany koa amin'ny fitondràny fitafy nentimpaharazana avy ao amin'ilay faritra. Nolazainy fa na dia voafetra aza ny fahafaha-manao ananan'ireo vehivavy ao amin'ny faritra misy azy, ny fisiany ho toy ny solontena ao an-toerana dia nanome fanantenana sy fahatokisantena ho azy ireo.
Fatemeh Eskandari, mpikambana iray ao anatin'ny Filankevitry ny tanànan'i Karaj dia nanao fampielezankevitra teo ambanin'ny tenifaneva hoe, “Olompirenena Faly — tanàna iray feno fanantenàna.” Milaza ny hampidina ny sara fidirana amin'ireo lanonam-panatanjahantna ho amin'ny antsasany izy ho an'ireo vehivavy mba ho ezaka fandrisihana ny fandraisana anjara imasom-bahoaka avy amin'izy ireny, ary nanohana ny fametrahana ireo fampianarana zavakanto sy fampianarana asa ho an'ny vehivavy tao amin'ny distrikany. i Mina Eskandari, mpikambana iray ao anatin'ny filankevitry ny tanànan'i Mohajeran ao amin'ny faritanin'i Hamadan ao Iràna ary vehivavy voalohany nitàna ny toeran'ny mpanolotsain'ny tanàna tao an-toerana, dia nanohana ny fanamboarana ny arabe mitondra mankao an-tanàna sy ny fametrahana klinika iray fitsaboana. Betsaka ireo tantara momba ny vehivavy Iraniana any anaty biraom-panjakana any sy ny fiantraikan'izy ireny any amin'ny vondrom-piarahamonina misy azy ireo afaka jerena eto.